221 အဘို့ရလဒ် mario
Super Mario ပဟေဠိဂိမ်း
Mario မင်းသမီးနမ်း 2
ဒီ Mario မင်းသမီးနမ်း၏ဒုတိယစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ Mario ဖြည့်စွက်ရန်အဘို့အပိုများသောစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ Mario အလုပ်တွေအားလုံးကိုလွန်ကိုကူညီပါများနှင့်အောင်မြင်စွာမင်းသမီးနမ်း။
ဒီ Mario စတိုင်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဗုံးဖောက်ခွဲမှု phyical ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမာရီယိုနှင့် Luigi တက်ဗုံးကြဲဖို့လက်ျာရာအရပျ၌သူတို့ကိုနေရာချပေးဖို့လက်ပေါ်ဗုံး၏ကန့်သတ်ငွေပမာဏကိုရလိမ့်မည်။ သငျသညျအဆငျ့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်ထိုနှစ်ပါးကိုသတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
စူပါမာရီယို Wonderland စွန့်စားမှု, ဤအချိန်မာရီယိုကို Mario Wonderland ပတ်ပတ်လည်ကသူ့အကြိုက်ဆုံးကားမောင်းနှင်နေသည်။ Wonderland လှပတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထွက်ဆွဲထားဖို့ Wonderland အကောင်းဆုံးနေရာပါစေကြောင်းကွဲပြားခြားနားသော themes များနှင့်အတူတက်ပါစေ။ အ Wonderland ကိုဖြတ်ပြီးမာရီယိုကိုကူညီပါ
Super Mario ပြိုင်ကား 2
ဒါကစူပါမာရီယိုကားအခြားဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အခြားလူမျိုးတဘက်၌ပြိုင်ကားနေနှင့်သင်အနိုင်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်! အပိုဆုကြေးငွေကိုအသုံးပွုဖို့, space bar ကိုမောင်းထုတ်ရန်မြှားတို့ကိုသုံးပါ။
ကြယ်တို့သည်အတူ Dora စွန့်စားမှု
စတက်လွင်ပြင်အပေါ်ဒိုစွန့်စားမှု, သင့်မစ်ရှင်ကြယ်များစုဆောင်းဒိုကူညီခြင်းနှင့်လမ်းအပေါ်တိရိစ္ဆာန်များကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်မှသကဲ့သို့သငျအဆငျ့ဖြည့်စွက်ဖို့ကြီးမားတဲ့ကြယ်ပွင့်မထိ။ အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်သင်ဆဲ, တစ်တစ္ဆေအလိုတော်ဒီအဆင့်ပြီးစီးပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်
သငျသညျကွီးစှာသောလူဆိုး mobster သော်လည်း, သူကြီးဒုက္ခရောက်ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီးမက္ကဆီကိုနှင့်အတူနယ်စပ်ကိုဦးတည်ပြေးသွားခဲ့ရတယ်အခါ။ သို့သော်ရဲများကသူ၏အပြစ်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ယခုပြန်နှငျ့သငျဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှလွတ်မြောက်ရန်အဖြစ်အစာရှောင်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကို run ပါ။ လမ်း Bor